कांग्रेसका शीर्ष नेता को कहाँबाट चुनाव लड्दैछन्?
कात्तिक २, २०७४| प्रकाशित २३:४२
काठमाडौं- प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरु कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् भन्ने चासो बढेको छ । पछिल्लो समय वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्चाले पनि चासोमा बढोत्तरी ल्याएको छ । कारण, गठबन्धनको सिकार प्रतिस्पर्धी पार्टीका शीर्ष नेता बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
केही जोखिमका बाबजुद प्रायः शीर्ष नेताहरु पुरानै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने तयारीमा देखिन्छन् । पार्टीका स्थानीय कमिटीहरुले पनि सोही अनुसार सिफारिस गरेका छन्।
नेपाल लाइभले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु कहाँबाट चुनाव लड्दै छन् भनेर खोतल्ने प्रयास गरेको छ । यसमा मुख्यतः पार्टीका स्थानीय कमिटीले सिफारिस गरेको क्षेत्र, संविधानसभामा प्रतिस्पर्धा गरेको क्षेत्र, सम्बन्धित दलमा रहेर टिकट वितरण गर्ने जिम्मा पाएका नेताहरुसँगको कुराकानी र नेताका गृहजिल्लालाई आधार बनाएका छौं।
वाम गठबन्धनबाट सुरुताका केही आत्तिएको कांग्रेस पनि अहिले शान्तसँग चुनावी रणनीति बनाइरहेको छ । केही पार्टीसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयास पनि उसले गरेको छ । चतुर राजनीतिक खेलाडी विजय गच्छदारलाई केही दिनअघि पार्टीमा भित्र्याउँदा सभापति देउवाले भनेका थिए– 'कांग्रेस थप बलियो भयो।'
शेरबहादुर देउवाः शेरबहादुर देउवा यस पटक पनि डडेल्धुराबाटै चुनाव लड्नेछन् । देउवालाई उम्मेदवार बनाउने कुरामा स्थानीय कमिटीमा विवाद छैन । यसअघि पनि उनले २०४८, २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० सालमा डडेल्धुराबाट चुनाव जितेका थिए।
रामचन्द्र पौडेलः पौडेल गृहजिल्ला तनहुँको क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । त्यसो त उनले चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको क्षेत्रमा अर्का नेता गोविन्दराज जोशीसँग किचलोमा फसेका छन् । साविक तीन वटा क्षेत्र रहेको तनहुँमा यस पटक दुई वटा मात्रै क्षेत्र छन् । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका जोशीभन्दा उपसभापति पौडेल नै हावी हुनेछन्।
प्रकाशमान सिंहः सिंह काठमाडौं १ बाट चुनाव लड्ने पक्कापक्की जस्तै छ । यसअघि पनि उनी त्यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । ०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा उनी अहिले भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाललाई दोस्रो बनाउँदै विजयी भएका थिए । काठमाडौं १ का लागि सिफारिसमा परेका अन्यभन्दा सिंह ‘हाइ प्रोफाइल’ छन्।
शशांक कोइरालाः कोइरालाले संविधानसभाको दुवै चुनावमा नवलपरासी १ बाट जितेका थिए । ०७० सालको चुनावमा उनले एमाले उम्मेदवार दीपक अधिकारीलाई ६ हजारभन्दा बढी मतले पराजित गरेका थिए । यस पटक पनि उनी नवलपरासी १ बाटै सिफारिसमा परेका छन् । महामन्त्री कोइराला सो क्षेत्रका लागि सर्वसम्मत सिफारिसमा परेका हुन्।
विजयकुमार गच्छदारः २०७० सालको चुनावमा मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) का उम्मेदवारका रुपमा २ ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गरेका गच्छदार एक ठाउँबाट मात्रै विजयी भएका थिए । उनी मोरङ ७ मा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग २ हजारभन्दा बढी मतले पराजित भएका थिए । सुनसरी ३ मा पनि एमाले उम्मेदवारलाई झिनो मतान्तरले पछि पार्दै उनी विजयी भएका थिए । यस पटक उनी कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुनेछन् । सुनसरी ३ नै उनको स्वाभाविक क्षेत्र हो।
अर्जुननरसिंह केसीः ०७० सालको चुनावमा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट ८ हजारभन्दा बढी मतान्तरले माओवादी उम्मेदवारलाई पछि पार्दै केसी विजयी भएका थिए । यसपटक पनि उनी नुवाकोट १ कै उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका छन् । केसीको अप्ठ्यारो के छ भने, सोही क्षेत्रबाट रामशरण महत पनि सिफारिस भएका छन् । साविकमा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको नुवाकोटमा यसपटक दुई वटा मात्रै क्षेत्र तोकिएका छन् । यसअघि पनि जितेका कारण उनी प्राथमिकतामा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
रामशरण महतः यसअघि नुवाकोट २ बाट चुनाव जितेका महत यसपटक क्षेत्र नम्बर १ का लागि सिफारिस भएका छन् । उनी चुनावी प्रतिस्पर्धी बन्नुभन्दा अघि नै उम्मेदवार बन्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । तर, नुवाकोटकै अर्को क्षेत्रमा चर्चित तर कम उचाइका नेताहरु सिफारिसमा परेकाले केसी र महतबीच क्षेत्र बाँडफाँट हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
गगन थापाः गगन थापा काठमाडौं ४ बाट चुनाव लड्ने पक्कापक्की जस्तै छ । यसअघि पनि सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थापाले आफ्नो लोकप्रियता घट्न दिएका छैनन् । उनीसँगै सिफारिसमा परेका अन्य नेताको तुलनामा थापाको लोकप्रियता र प्रभाव बढी भएकाले पनि उनी उम्मेदवार बन्ने पक्का छ।
एमालेका शीर्ष नेता कहाँ-कहाँबाट चुनाव लड्दैछन्?
यी निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव भिड्दैछन् माओवादीका शीर्ष नेता
बाँकेमा सरकारी क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा अाएसँगै बिरामीलाई सहज सेवा
सशस्त्रका सहायक हवल्दार ११ हजार घुससहित पक्राउ
कागजात पेस गरेको २१ दिनमै भूकम्पपीडितलाई सस्तो ब्याजको ३ लाख ऋण
चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा चीन, हङ्कङ र मकाउ जोड्ने विश्वकै लामाे समुद्री पुलकाे उद्घाटन
भारतीयलाई नागरिकता बेच्न खोजेको आरोप लगाउँदै वडा अध्यक्ष र सचिवसहित ४ जनाविरुद्ध उजुरी
रोहिङ्ग्या प्रकरण : म्यान्मारका पाँच उच्च सैनिकमाथि अस्ट्रेलिया भ्रमणमा प्रतिबन्ध